သင့်ဖုန်းကိုအရန်အဖြစ်သိမ်းဆည်းခြင်း Gadget သတင်း
သင့်ဖုန်းကိုအပြည့်အဝ Backup လုပ်နည်း
Ignatius ခန်းမ | | မိုဘိုင်း, လဲ tutorial
ကျောင်းများတွင်လိုအပ်သောဘာသာရပ်များအနက်မှတစ်ခုမှာအထူးသဖြင့်သတင်းအချက်အလက်အများစုမှာဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်သင့်သည် အရန်ကူးမိတ္တူများ။ အရန်ကူးခြင်းသည်အမြဲတမ်းလုပ်ရန်စဉ်းစားထားသည့်အရာဖြစ်သော်လည်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်သုံးစွဲသူများစွာသည်သူတို့၏ဒေတာများဆုံးရှုံးသွားသည့်အခါများစွာနောင်တမရပါ။
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများကိုနေ့စဉ်အကုန်လုံးနီးပါးအရာရာတိုင်းအတွက်အသုံးပြုသည်၊ ဘဏ်အကောင့်များနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ အီးမေးလ်ပို့ခြင်း၊ စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်း၊ လူမှုကွန်ယက်များနှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေများစစ်ဆေးခြင်းစသည်တို့အတွက်ဖြစ်သည်။ operating system ကိုဒီရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူပြောင်းလဲပါပြီ။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့နှင့်ထိုအဘို့, ဒါဟာအလွန်အရေးကြီးပါသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်း၏မိတ္တူကူးပါ ပုံမှန်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal နှင့်ရိုက်ယူသောဓာတ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၌ရရှိနိုင်သောအပိုအကြောင်းအရာများနှင့်တူညီသည်သို့မဟုတ် ပို၍ တန်ဖိုးရှိသည်။ WhatsApp သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်သာမကအသုံးအများဆုံး messaging application ဖြစ်သည်မည်သည့်လက်ကိုင်ဖုန်းတွင်မဆိုအသုံးအများဆုံး application ဖြစ်သည်.
iOS ရော Android ပါပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုအပြည့်အဝမိတ္တူကူးရန်ခွင့်ပြုပါအကယ်၍ ၎င်းသည်ပျောက်ဆုံးလျှင်၊ အခိုးခံရလျှင်သို့မဟုတ်အလုပ်မလုပ်ရလျှင်၊ ဒေတာအားလုံးကိုအခြားမည်သည့် terminal သို့မဆိုပြန်ယူနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားစိတ် ၀ င်စားစေမည့်အချက်အလက်များနှင့်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများနှင့်ဆက်နွှယ်နေသောသတင်းအချက်အလက်များကိုသာကူးယူခြင်း၊ ပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်၊ အရန်ကူးယူရန်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်နိုင်သည်။
1 Android မှာ Backup လုပ်နည်း
1.1 WhatsApp ကို
2 iOS တွင် backup လုပ်နည်း
2.3 WhatsApp ကို
2.4.2 Windows / macOS 10.14 နှင့်အတူကွန်ပျူတာကနေ
2.4.3 MacOS 10.15 နှင့်အထက်ရှိသော Mac မှ
Android မှာ Backup လုပ်နည်း
နင်။ သုံးစွဲသူများပြုလုပ်နိုင်ရန် Google သည် WhatsApp နှင့်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သည် WhatsApp ကို Google ဆာဗာများပေါ်တွင်အရန်ကူးထားပါအကယ်၍ ၎င်းနေရာသည်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသော (15 GB) မှနုတ်လျှင်။ WhatsApp တွင်သိမ်းဆည်းထားသောအကြောင်းအရာများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့အရန်ကူးယူရန်မည်မျှအကြိမ်ပြုလုပ်လိုသည်ကိုသိရှိနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုရယူရမည်ဖြစ်သည် ဆက်တင်များ> ချက်တင်များ> အရန်ကူးခြင်း။ ရရှိနိုင်သောရွေးချယ်စရာများမှာနေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်နှင့်လစဉ်ဖြစ်သည်။ terminal ကိုအားသွင်းနေချိန်တွင်ကူးယူခြင်းလုပ်ငန်းကိုညဘက်တွင်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
Android စမတ်ဖုန်းကိုသုံးရန် Gmail အကောင့်တစ်ခုရှိရန်လိုအပ်သည်။ ဤ Gmail အကောင့်မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal တွင်အဆက်အသွယ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်တွင်ချိန်းဆိုမှုများနှစ်ခုလုံးကိုအမြဲတမ်းတွေ့ရလိမ့်မည်။ အီးမေးလ်များကိုသိသာထင်ရှားပါသည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ terminal တွင်မဟုတ်ဘဲဂူဂဲလ်၏ဆာဗာများပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ အဆက်အသွယ်များသို့မဟုတ်ပြက္ခဒိန်ကိုအပိုသိမ်းဆည်းရန်မလိုအပ်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ terminal ကိုအတွက်လုပ်တိုင်းပြောင်းလဲမှု၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂျီမေးလ်အကောင့်တွင်အလိုအလျောက်ထင်ဟပ်လိမ့်မည်။
အခုဓာတ်ပုံတွေပေါ်လာပြီ။ ဂူဂဲလ်ဓာတ်ပုံများသည်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပြီးယနေ့ကျွန်ုပ်တို့မိုဘိုင်းစက်ဖြင့်ယူသောဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများအားလုံးကိုအလိုအလျောက်အရန်ကူးရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဂူဂဲလ်မှဤအခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုသည် WiFi ကွန်ယက်တစ်ခုသို့ချိတ်ဆက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုအားလုံး၏အရည်အသွေးမြင့်မိတ္တူ (မူရင်းအရည်အသွေးမဟုတ်) ကိုသိမ်းဆည်းသည်။ ထို့ကြောင့်မူလအရည်အသွေးကိုကျွန်ုပ်တို့မထိန်းသိမ်းလိုပါကထပ်တိုးထပ်မံကူးယူရန်မလိုအပ်ပါ။ ခြားနားချက်ခဲသိသာသည်။ ဤအပလီကေးရှင်းကို Android တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။
အခုဆိုရင်သင်ဟာ operating system ကိုယ်နှိုက်နှင့်အပလီကေးရှင်းများသည် Android တွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာပြီဆိုလျှင်အရန်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အချိန်ကိုအမှန်တကယ်ဆုံးရှုံးနိုင်သလားဆိုသည်ကိုသင်ဆန်းစစ်ရမည်။ သင်သည်သင်၏ဘဝကိုရှုပ်ထွေးချင်ကြဘူးနှင့်သင်ကြိုက်တတ်တဲ့လျှင် သင်၏စက်မှတိုက်ရိုက်အရန်ကူးယူပါအောက်ပါအဆင့်များမှာ -
ပထမ၊ setting များကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိရိယာ၏နှင့် menu ကိုရှာပါ Google.
နောက်, ငါတို့ option ကိုရှာပါ Backup လုပ်ပါ
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါတို့ရုံရှိသည် အရံသိမ်းကို Google Drive သို့ဖွင့်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ၏အချက်အလက်များကိုမည်သည့်အကောင့်တွင်သိမ်းလိုသည်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဤအချက်အလက်များမှာ -
ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal အသစ်တွင်ယခင်ကလုပ်ခဲ့သည့် Android တွင် backup တစ်ခုကိုပြန်ထားပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမတ်ဖုန်း terminal ကိုစတင်သောအခါဤ option ကိုရွေးချယ်ပါAndroid configuration ရွေးချယ်မှုများမှကျွန်ုပ်တို့တွင်ထို option မရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား backup လုပ်ရန်သာခွင့်ပြုသည်။
iOS တွင် backup လုပ်နည်း
iOS မှာ backup လုပ်တဲ့အခါမှာ Android နဲ့မတူတဲ့အချက်နှစ်ခုရှိပါတယ်။ တစ်ချက်အနေနှင့်၊ iCloud တွင်နေရာချထားပါက Apple Cloud တွင် terminal တစ်ခုလုံးကို back up လုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အခမဲ့ပေးထားသော5GB သာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ပြက္ခဒိန်၊ အဆက်အသွယ်များ၊ အလုပ်များ၊ ဝိုင်ဖိုင်စကားဝှက်များ၊ မှတ်စုများ၊ စာတိုများ၊ Safari မှတ်သားထားသည့်အရာများ၊ မူလစာမျက်နှာကျန်းမာရေး၊ ပိုက်ဆံအိတ်မိတ္တူများကိုတစ်ချိန်လုံးစုစည်းထားနိုင်သည်။ , ဂိမ်းစင်တာနှင့် Siri ။
Apple မှ၎င်း၏ထုတ်ကုန်တစ်ခုအတွက်အသုံးပြုရန်အတွက် ၅ GB GB ပေးထားသောအာကာသသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်အသွယ်များနှင့်ပြက္ခဒိန်တစ်ခုလုံး၏မိတ္တူပွားတစ်ခုကိုသိမ်းဆည်းရန်လုံလောက်သည်ထက်ပိုသည်။ tab နှစ်ခုလုံးကို iCloud ရွေးချယ်စရာထဲမှာ activate လုပ်ထားပါတယ်။
အကယ်၍ iCloud တွင်နေရာချထားပါကကျွန်ုပ်၏စက်တွင်ရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများအားလုံး၊ Apple Cloud ကိုအလိုအလျောက် upload လုပ်သည် မူရင်း resolution အတွက်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Cloud တွင်သိုလှောင်ရန်နေရာမရှိ (အခမဲ့5GB သာအနည်းငယ်သာသုံးစွဲသည်) မရှိပါကထိုအကြောင်းအရာ၏မိတ္တူတစ်ခုအမြဲတမ်းရရှိရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာ Google Photos ကိုသုံးခြင်းဖြစ်သည်။
Android အတွက်ဗားရှင်းလိုဂူဂဲလ်ဓာတ်ပုံများ၊ အရည်အသွေးမြင့်မိတ္တူကိုအလိုအလျောက် upload လုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch တို့ရိုက်ယူခဲ့သောဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများအားလုံးအနက်မှမူရင်း resolution ဖြင့်သိမ်းဆည်းထားလိုပါကအပိုကော်ပီကူးရန်မလိုအပ်ပါ။
WhatsApp ကို Backup လုပ် ၎င်းသည် iCloud ရှိသိုလှောင်မှုနေရာအကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်နေရာအကန့်အသတ်ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် WhatsApp ကို configure လုပ်ထားသင့်သည်။ ၎င်းတွင်အရန်တွင်ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများမပါ ၀ င်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အရန်ကူးခြင်းကို ပြုလုပ်၍ မရပါ။
iPhone ကိုယ်တိုင်မှအရန်ကူးယူရန်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာမှာမိုto်းတိမ်သို့သိုလှောင်ရန်နေရာရှိသည်။ ဤကိစ္စသည်သင်၏ကိစ္စဖြစ်ပါက၊ အောက်ပါအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ရမည် -
ငါတို့သုံးတယ် setting များကို
ချိန်ညှိချက်များအတွင်း၊ ကိုနှိပ်ပါ iCloud.
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ option ကိုရှာပါ ICloud ကူးယူပါ ကျနော်တို့ switch ကို activated ။
မသန်စွမ်း backup ကိုပြန်ထားiCloud backup တွင်သိမ်းထားသောဒေတာအားလုံးကိုပြန်ယူလိုသည့် iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch ကိုကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးစတင်သောအခါ၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်ရမည်။
Windows / macOS 10.14 နှင့်အတူကွန်ပျူတာကနေ
iCloud တွင်ကျွန်ုပ်တို့နေရာမရှိပါက၎င်းကိုငှားရန်မရည်ရွယ်ပါကကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာ၊ ကျွန်ုပ်၏ iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod Touch ၏မိတ္တူပွားတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည်။ Mac ပေါ်တွင်အရန်ကူးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၊ operating system ၏ဗားရှင်းပေါ်တွင်မူတည်သည်MacOS 10.15 လိုပဲ Apple က iTunes ကို system ထဲကနေဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်။
အကယ်၍ သင်၏ကွန်ပျူတာကို Windows သို့မဟုတ် macOS 10.14 (သို့) အောက်မှစီမံသည်ဆိုလျှင်၊ iTunes ကိုသုံးမယ် အရန်ကူးရန်။ iTunes ကိုဖွင့်ပြီးလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ device ကိုချိတ်ဆက်ပြီး application တွင်ပြသသော icon ကိုနှိပ်ပါ။
ထို့နောက်ဘယ်ဘက်ကော်လံတွင်၊ ကိုနှိပ်ပါ အကျဉ်းချုပ် လက်ျာဘက်၌, ငါတို့ box ကိုမှတ်သား ဒီကွန်ပျူတာအတွင်းပိုင်း အရန်ကူးမိတ္တူများ။ အရန်ကူးခြင်းကိုစတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ ယခုမိတ္တူကူးပါ။
MacOS 10.15 နှင့်အထက်ရှိသော Mac မှ
MacOS 10.15 ဖြင့် iTunes သည်ဂေဟစနစ်အတွင်းအသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုမဟုတ်တော့ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch ကိုအရန်အဖြစ်သိမ်းထားနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ရုံရန်ရှိသည် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကို Mac နှင့်ဆက်သွယ်ပြီး Finder ကိုဖွင့်ပါအရန်ကူးလိုသည့်ကိရိယာကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်။
Finder ၏ညာဘက်ခြမ်းတွင် iTunes မှပေးထားသောရွေးချယ်စရာများကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ Backups ကိုသွားပြီး check box ကိုသာလုပ်ရပါမယ် iPhone အချက်အလက်အားလုံးကိုဒီ Mac သို့အရန်ကူးပါ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်လုပ်ငန်းစတင်ရန် Back up ကိုနှိပ်ပါ။
Mac နှင့် Windows နှစ်ခုစလုံးတွင်အရန်ကူးယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ရှိအချက်အလက်ပမာဏပေါ် မူတည်၍ ကြာလိမ့်မည်။ Android, iPhone, iPad, iPod တို့မှာလုပ်ထားတဲ့ backup နဲ့မတူတာက စက်ပစ္စည်းထဲတွင်ယခုအချိန်တွင်ရရှိနိုင်သည့်အချက်အလက်တစ်ခုချင်းစီကိုသိမ်းဆည်းသည်ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများအပါအ ၀ င်ကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုဂူဂယ်လ်တိမ်တိုက်ထဲတွင်သိမ်းထားရန်ဂူဂဲလ်ဓာတ်ပုံများကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » လဲ tutorial » သင့်ဖုန်းကိုအပြည့်အဝ Backup လုပ်နည်း
အော်စကာဆု ၂၀၂၀ - Gala နှင့်ဘယ်လိုလျာထားချက်တွေကိုလိုက်နာရမလဲ
ကျွန်ုပ်၏ WiFi သည် Android မှခိုးယူခံရခြင်းကိုမည်သို့သိနိုင်မည်နည်း